Canon EOS R5 C no fakan-tsary Full Frame Cinema EOS 8K voalohany
Ny marika FiiO dia "mpisava lalana sinoa" amin'ny tsenan'ny teknolojia portable Hi-Fi. Nanomboka ny asany tamin'ny taona 2007 ny orinasa…
Denon dia fantatra amin'ny maha mpanamboatra fitaovana audio Hi-Fi sy Hi-End ho an'ny fampiasana matihanina sy an-trano, bebe kokoa…
Ugoos UT8 sy UT8 Pro amin'ny Rockchip 3568 - famerenana, famaritana
Tsaroantsika rehetra ny fanandramana tsy nahomby nataon'ireo mpanamboatra sinoa tamin'ny sehatra Rockchip. Navoaka tamin'ny taona 2020-2021…
Noho ny habetsahan'ny tolotra amin'ny tsenan'ny Smart TV, ny fanontaniana momba ny fisafidianana ny teknolojia amin'ny 4K sy FullHD dia anontaniana matetika. 2-3 taona lasa izay, ...
Ny andiany "The Squid Game" - fanentanana hahazoana tombony ara-bola
Ny andian-tantara velona Koreana Tatsimo Squid Game, navoaka tao amin'ny Netflix, dia nahavoa tsy nampoizina. Taorian'ny…
Amidy ny boaty fahitalavitra Ugoos AM7. Nirohotra nanafatra gadget avy amin'ny tranonkalan'ny Internet Shinoa ny olona avy amin'ny firenena rehetra. Toa hita fa,…
Ny fanombohana ny ROCKHIP 3566 Set-Top Box Chips vaovao dia nanokatra fahafaha-manao vaovao. Niahiahy izy ireo fa nitombo ...
MINI PC Beelink GKmini 8/256 miaraka amin'ny Windows 10 - topy maso
Zava-baovao iray hafa amin'ny marika sinoa Beelink no mahaliana ny mpividy amin'ny toetrany teknika sy ny vidiny ambany indrindra. Mini PC Beelink ...
Fahitalavitra maranitra - 4K sy Bezelless DL ary DN Series
Ny marika Danoa VOXX, izay nahazo ny mari-pamantarana Sharp noho ny filàny manokana, dia nanapa-kevitra ny handefa ireo fahitalavitra 4K eny an-tsena ho an'ny ...
Iza no tsara kokoa raha mividy fahitalavitra - na misy Smart TV
Sasatry ny manao dokam-barotra ny magazay elektronika. Ny mpivarotra rehetra, manandrana mivarotra fahitalavitra amin'ny mpividy, dia midera ny teknika, ...
G50S - fanaraha-maso lavitra ho an'ny TV-BOX: topimaso, fiheverana
Rehefa avy nandinika ny fanaraha-maso lavitra G20S PRO lavitra ianao dia nisy ny faniriana hizaha toetra ny tsimbadika farany amin'ny gadget fanaraha-maso TV-BOX - G50S. Nataon'i…
Monitor LCD 27-inch - 2K, 75 Hz miaraka amin'ny matrix IPS amin'ny $ 200
Miaro ny tompony tsy hikorontana ny tompona smartphone
Titan Pocket - smartphone Android misy keyboard BlackBerry